မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံ – The Blog of Aung
ဒီနေ့ စစ်ဒနီက မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အဖုအပိန့်တွေ ထွက်လာလို့ ဆေးရုံသွားပြမှာကို လိုက်ပါပေးဖို့ အကူအညီတောင်းလာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လောက်ကလဲ မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းက လူတစ်ယောက် အဲသည်လို အရေပြားပေါ်မှာ အဖုအပိန့်တွေ ရုတ်ချဥ်းပေါ်လာလို့ ဆေးရုံကို လိုက်ပို့ပေးဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့် အကူအညီတောင်းတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဒနီမှာ အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတဲ့ အခါမှာ အရေးကြီးတာက ဆရာဝန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လို လည်လည်ပတ်ပတ် ပြောနိုင်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မပြောနိုင်ဖူး ဆိုရင်တော့ စကားပြန် ခေါ်ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတဲ့ သြဇီလူမျိုးများပင် ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးပညာ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်က သက်ဆိုင်ရာ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ဆေးရုံရဲ့ Database (ကွန်ပျူတာနဲ့ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းတဲ့ စံနစ်) ကနေ ထုတ်ပေးပြီး လူနာကို နားလည်အောင် ဦးစွာ ဖတ်ရှုစေပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို သိထားတဲ့ အတွက် အကူအညီတောင်းလာတဲ့ မိတ်ဆွေကို စကားပြန်ခေါ်ဆိုပြီး သွားဖို့ အကြံပေးပေမဲ့၊ သူက မြန်မာ စကားပြန် ချိန်းဆိုရတာ ခက်ခဲတဲ့ အကြောင်း၊ စကားပြန်ရဖို့မှာလဲ အနည်းဆုံး အချိန် ၂ လလောက် စောင့်ရမဲ့ အကြောင်းကြောင့် စာရေးသူကိုသာ လိုက်ပါပြီး စကားပြန်လုပ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
ကျမ္မာရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့ အခါ အကူအညီပေးရတာ ကုသိုလ်လဲဖြစ်တဲ့ အတွက် လိုက်ပါပေးပြီး၊ စကားပြန်လုပ်ပေးရမှာလဲ အခက်အခဲမရှိပေမဲ့၊ ဆေးရုံက ကွန်ပျူတာနဲ့ ထုတ်ပေးတဲ့ ရောဂါအကြောင်းနဲ့ ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်တွေ ရှင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ စာကို မြန်မာလို တစ်ကြောင်းစီ ဘာသာလိုက်ပြန်ဖို့ ဆိုတာတော့ မလွယ်ပါဖူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြန်ဆိုပြောပြ ဖို့ဆိုရာမှာ အင်မတန် သတိထားရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက် လူကို လိုက်ပါပေးခဲ့တုန်းက ဆေးရုံမှာ အဲဒီ ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် စာရွက်ကို မထုတ်ပေးခင် သူတို့က ဘာ ဘာသာစကားနဲ့ ထုတ်ပေးရမလဲ မေးတဲ့ အခါ – မြန်မာဘာသာ ဆိုတော့ သူတို့ ဆေးရုံ အချက်အလက် သိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာဘာသာ မရှိတဲ့ အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုဘဲ ထုတ်ပေးတာကို ဖတ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက စကားပြန်ကိုယ်တိုင်လဲ ဆီလျှော်အောင် သေချာဘာသာ မပြန်ပေးနိုင်လို့ မြန်မာ အဘိဓါန်မှာ ရှာတာလဲ စကားလုံးတွေ မရှိတဲ့အခါ၊ Google က တဆင့် ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကို ဖတ်ရှုပြီး ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အခုတစ်ခေါက်လဲ လိုအပ်ရင် အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာလေး တစ်ခုကို ဆွဲပြီး အကူအညီတောင်းသူနဲ့ ဆေးရုံကို လိုက်ပါပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်က ရောဂါအခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို လူနာနားလည်စေဖို့ အတွက် အချက်အလက်မှတ်တမ်း ထုတ်ပေးတဲ့ အခါ – ဘာ ဘာသာစကားနဲ့ ထုတ်ပေးရမလဲ ဆိုတာကို မေးပါတယ်။
“အင်္ဂလိပ်လိုဘဲ ထုတ်ပေးရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ မနှစ်က တခေါက်ရောက်တုန်းက မြန်မာဘာသာနဲ့ ထုတ်ပေးဖို့ ပြောခဲ့ပေမဲ့ ဆေးရုံမှာ မြန်မာဘာသာ မရှိဖူးလို့ သိခဲ့ရပါတယ်” လို့ ပြောတဲ့ အခါ၊ ဆရာဝန်က “နေပါအုံး… ရှာကြည့်ပေးပါမယ်” ဆိုပြီး သူ့ကွန်ပျူတာမှာ ရှာတဲ့ အခါ မြန်မာဘာသာ တွေ့တဲ့ အတွက် မြန်မာဘာသာနဲ့ ရိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သြစတေးလျ နေရာ တော်တော်များများမှာ မြန်မာ ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်း မသိတဲ့ တိုင်းပြည်က လာတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာစာ ဘာသာစကား ဆိုတာလဲ ဘယ်ရုံး ဌာနမှာမှ စာရင်းမရှိတဲ့ ဘာသာ စကားဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အမြဲတမ်း သိမ်ငယ်စရာ ဖြစ်နေရာက၊ အခုလို မြန်မာစကား မြန်မာစာကို ဆစ်ဒနီက ဆေးရုံကြီးတစ်ခုမှာ အခြားဘာသာစကားများနဲ့ တန်းတူ စာရင်းဝင် ရှာဖွေ တွေ့လိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာ- မြန်မာလူမျိုးကို ကမ္ဘာပေါ်က တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုရှိတဲ့ လူမျိုးတစ်ခုလို့ အထောက်အထားနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရတာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတဲ့ တလျှောက်မှာ ဒါပထမဦးဆုံးပါဘဲ။
တချိန်က အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စကားဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာသုံး ဘာသာစကား ဖြစ်ပေမဲ့ ယခုခေတ် နည်းပညာ တိုးတက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီနေ့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စကား မတတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာစကားကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာပတ် ခရီးသွားနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ နေရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ကမ္ဘာ့ဘာသာ စကားပေါင်းစုံကို စုစည်းသိမ်းယူဖို့ဟာ တိုးတက်လာတဲ့ အချက်အလက် နည်းပညာရဲ့ ရှာဖွေ သိမ်းဆည်းမှု စံနစ် (Database) အကူအညီနဲ့ ပြုလုပ်ရပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက် သိမ်းဆည်းမှု စံနစ်ထဲမှာ မျိုးမတူတဲ့ ဘာသာစကား အက္ခရာ တွေ ထည့်သွင်းဖို့ ဆိုတာ စံပြုစံနစ် တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Unicode စံနစ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုဖို့ ဆောင်ရွက်ကြတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ဆေးရုံက ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ဖတ်ရတဲ့ အခါမှာ သာမာန် အင်္ဂလိပ်စကား အားနည်းသူတွေ အတွက် အလွန်အထောက်အကူ ဖြစ်တာ လက်တွေ့ပါဘဲ။ တကယ်တော့ ဒီခေတ်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ ယှဥ်ဘောင်တန်းပြီး တိုးတက်ဖို့ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အင်မတန် အရေးပါလှတဲ့ အပြင်၊ ဒါဟာ လူသား အကျိုးပြု အခန်းကဏ္ဍအသီးအသီး အတွက်မှာလဲ အလျှင်အမြန် တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် အခြေခံ အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် – အဆောက်အဦတစ်ခု ဆောက်လုပ်ရာမှာ အုတ်မြစ်ခိုင်မာမှ အထပ်အထပ် ဆောက်လို့ရသလို တချိန်က ဖြစ်သလို မြေပေါ်မှာ တည်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦ ပေါ်မှာတော့ အထပ်အထပ် တက်ဆောက်လို့ ရမှာမဟုတ်ပါဖူး။ ဒါကြောင့်မို့ မှန်ကန်တဲ့ စံနစ်ဖြစ်တဲ့ Unicode စံနစ်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသိဥာဏ်ပညာ နည်းပါးပြီး အမျှော်အမြင်မရှိတဲ့ သူတွေကတော့ Unicode စံနစ်ပြောင်းလဲတာဟာ နိုင်ငံရေးပယောဂ လိုလို၊ Facebook ပေါ်မှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်တဲ့ စာတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ လုပ်သလိုလို၊ သူတို့ရဲ့ ရှိစုမဲ့စု ဥာဏ်လေးတွေကို ထုတ်ပြီး ဝေဖန်ကြပါတယ်။ အချို့ကလဲ ကာရာအိုကေ အဆင့်လောက် တွေးခေါ်တတ်တဲ့ အပေါစား အတွေးတွေနဲ့ ကာရာအိုကေဆိုဖို့ Unicode မလိုအပ်ပါဖူး လို့လဲ ဆိုကြပါသေးတယ်။ ဘာသာစကား နည်းပညာစံနစ်ဟာ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက် အသုံးဝင် အကျိုးဖြစ်လာနေပြီး ကွန်ပျူတာသုံး စာလုံးစံနစ်ဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါတယ် ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ဦးနှောက်တွေက မစဥ်းစား မတွေးမြင်တတ်ကြပါဖူး။
ဒီလို လူမျိုးတွေ ပေါနေသေးရင်တော့ သူများနောက်လိုက် ဘဝ၊ စင်ကာပူလို ကုန်တင်ကုန်ချ မှောင်ခို ဆိပ်ကမ်းလေး တစ်ခုမှာ ကျွန်သွားခံဖို့တောင် အောက်ကျခံ အခွင့်အရေးလုယူနေရတဲ့ ဘဝ၊ ခိုးစား ဝှက်စားမှ စားရသောက်ရမဲ့ဘဝ၊ ဘိန်းကုန်သည် ဘိန်းဓါးပြပေးမှ ချမ်းသာရတဲ့ ဘဝ၊ ဒီလို အောက်တန်းစား ဘဝတွေက လွတ်ရာလွတ်လမ်း ဝေးနေအုံးတော့မှာပါ…။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on November 20, 2019 November 21, 2019 Categories အတွေ့အကြုံTags စာပေ, ဘာသာစကား
11 thoughts on “မြန်မာစကား ပြောတတ်တဲ့ စစ်ဒနီက ဆေးရုံ”
Kyaw Soe Win says:
ပြည်ပရောက်ဖူးတဲ့လူအများစုက ယူနီကုဒ်ရဲ့ အရေးပါမူကို သိရှိကြတာလူအများစုပါ။ စီးပွားရေးသမားတွေကသာ တဘို့ထဲကြည့်ပြီး တဇော်ထဲ ဇော်နေကြတာပါ။ မလိုပါဘူးကွာ အီးလိုတတ်ရင် ကမ္ဘာပတ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ခွေးသူတောင်းစားတွေ လည်ပင်းတက်နင်းချင်တယ်။ မိမိမြန်မာစာကို ကမ္ဘာကသိမှာသေမလောက်ကြောက်နေကြတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။😏😏😏😏😏
ပညာမတတ်တော့ စဥ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးတယ်၊ စဥ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးတော့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် နားမလည်ဖူး၊ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ် နားမလည်တော့ သူတပါးကို အားကိုးရတယ်၊ သူတပါးကို အားကိုးရလွန်းတော့ – မိတ်ဆွေပြောတဲ့ ‘သူတောင်းစား’ တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ 😀
အီး လိုညှပ်မှ လူရာဝင်တယ် ထင်ကြတယ်၊ အီး လိုတတ်မှ စာတတ်တယ် ထင်ကြတယ်၊ အခုစာရေးသူလို ပြည်ပမှာနေပြီး မြန်မာစာ စကားကို အလေးထားပြတာ အလွန်လေးစားပါတယ်။ အားပေးနေပါတယ်။
Ajin Peter says:
Unicodeစံနစ် တီထွင်သူများအား ကျေးဇူးတင် လေးစားပါသည်။
မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်များ လိုအပ်နေပါသေးသဖြင့် ပြုပြင်စီစစ်ပေးစေလိုပါသည်။
Aung Moe Htoo says:
Myanmar Unicode စနစ်ဟာဘာသာပြန်ဖို့ အတွက်အထောက်အကူ ဖြစ်စေတာအမှန်ပါဘဲ။သို့သော် ဒီ version ထက်ကောင်းမွန်လာအောင် ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ မြန်မာဘာသာ ကျွ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်လျှက်ဘဲရှိနေပါသေးတယ်။ Unicode ကိုကြိုးစားပမ်းစား တည်ထွင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင် လေးစားလျှက်ပါ။
There won’t be “only Unicode” system as long as people using Myanmar IP address can read both Zawgyi and Unicode.
I believe it will take time until Myanmar Unicode is widely used by various platforms.
မြန်မာစာအတွက် ဘာသာပြန်အလွဲတချို့ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေက ကူညီပြီးဖြေရှင်းပြုပြင်ပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်.
ဘာသာတိုင်းမှာ ပထမ ဘာသာပြန်အခက်အခဲ အမှားအယွင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေက ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဘာသာပြန် ဖြစ်ကြတာပါ။
နိုင်ငံတကာဗဟုတနည်းပါးကြရှာသူများ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေ အပြင်ဘက်(ပြည်ပ)ခရီးကို တခါတခေါက်မျှမရောက်ဖူးကြရှာသူများ လက်လှုပ်မှပါးစပ်လှုပ်ရရှာသူ(live hand to mouth)များကတော့ ယူနီကုဒ်ဆိုတာကြီးရဲ့ အရေးပါပုံကို သိနိုင်ကြရှာမယ်မထင်ပါဘူး။
အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတာက ပြည်ပ အနောက်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ နေကြတဲ့ မြန်မာအချို့ကိုယ်တိုင် ဒီနေ့ နည်းပညာ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမှာ အက္ခရာစာလုံး စံနစ် ဘယ်လောက် အရေးတကြီး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မသိကြတာပါဘဲ။
Previous Previous post: ယူနီကုဒ်အပြောင်း အထူးသတိပြုစရာ
Next Next post: စစ်ဒနီက ၂၀၂၀ နှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုကြသူများ